Somaliland: Barlaamanka iyo Guurtida Doorosho La’aan Ma Shaqeynayaan | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Published on November 23, 2018 by sdwo · No Comments
Adduunka lagama maqal Barlamaan fadhiyey in 13 sannadood! Waa arrin cajiib ah. Haddii uu Barlamaankani awoodi kari waayey in uu sameeyo saami qaybsi cusub, waa in la doorto xildhibaano cusub oo sameeya sharciyo cusub. Barlamaanka fadhiyey in ka badan 13 sannadood, ma aha mid dalka iyo dadka wax u kordhinaya, waa siyaasiyiin mushahar uun guranaya, oo ka dhigtay shuqul.
Dastuurku waa sida buug had iyo jeer la qorayo, marna wax lagu darayo, marna wax laga bedelayo, lakiin ma shaqeyn karo haddii golayaashii maamulihaa ay iyaguba fadhiisteen.